SOICARE humerifi huurfier diffuser 5.5L top buuxinta huurka hawada ee loo yaqaan 'hypochlorous acid acid' iyadoo la adeegsanayo, Shiinaha SOICARE qabow humidifier diffuser 5.5L top buuxinta humidifier ultrasonic for acid hypochlorous acid iyadoo la adeegsanayo Soosaarayaasha, Shirkadaha, Warshadaha - Sunpai warshadaha xadidan
Hoose / Sare
1. Waqti dheer iyo huuri awood leh: humidifier-kan wuxuu leeyahay haanta biyaha 5. 5.L, masarka wuxuu socon karaa 20 saacadood oo heer sare ah, iyo 45 saacadood oo heer hoose ah. Waxay ku habboon tahay xafiis weyn, qolka fadhiga iwm.
2. Iyada oo la adeegsanayo saxan gaar ah oo atomizer ultrasonic ah, hawo-mareenkan loogu talagalay biyaha aashitada hypochlorous adigoo isticmaalaya, waad u istcimaali kartaa jeermiska jeermiska.
3. Waxay leedahay shaqada saliidaha lagama maarmaanka u ah isku habboonaanta. Iyada oo leh gunno dheeraad ah oo caraf udgoon ah, saliidaha lama huraanka ah waxaa lagu dari karaa iyadoo la adeegsanayo dhibic, ka caawinta abuurista jawi deggan oo hagaajiso tayada hurdadaada.
4. Naqshadaynta sare ee buuxinta, way fududahay in la buuxiyo. Naqshadaynta Sare-u-qaadida ayaa si sahlan u saami-siiya in la buuxiyo oo la nadiifiyo iyada oo aan dhibaato la soo derista haanta biyaha. Isla markaana si otomaatig ah ayuu u xidhmayaa marka biyuhu dhammaadaan ama heerka biyuhu hoos u dhacaan.
5. Qalabka huuriyuhu wuxuu leeyahay badhanka heerka khaldan ee lagu hagaajin karo. Waxaad ku hagaajin kartaa mugga wax soo saarka ee xarkaha adiga oo taabanaya batoonka waxaadna gebi ahaanba ku raaxeyn kartaa jawiga humidify ugu raaxada leh adoo hagaajinaya qoyaankaaga ugu fiican.
6. Codku shaqeynayo wax ka yar 35dB, waxay ku siinaysaa jawi deggan. Ma dareemi doontid qaylo xitaa markaad gashanayso miiskaaga habeenkii.
7. Qalabkan huur-beedka ah, waxaad kuheli kartaa 360 ° humidation hufan: Waxay huuri kartaa hawada ilaa 30H qalliin joogto ah, huudhan huwan 360 °, si aad u neefsato hawo nadiif ah oo aad uga fog huurka qubayska, urta cusub hawo sidaad tahay duur joog.
8. In ka badan Humidifier: Maaddaama humidifierkeenu uu la imaanayo 7 Iftiinno Iftiinka Iftiinka leh ee ku habboon guriga, xafiiska iyo meel kasta oo aad rabto inaad ku dhejiso, waa hadiyadda ugu fiican qoyskaaga iyo saaxiibkaa.
7 Iftiin midab leh oo loo yaqaan 'LED light'
Mugga Xajmiga Sare
280mL / saac
Mugga Miisaanka Yar
125mL / saac
Isku qas saliidaha lagama maarmaanka u ah Antibacterial Guard Saliidaha Muhiimka u ah Diffuser